သိထားသင့်သော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲများ -
Posted on November 9, 2018 Author Myat Moe	Comment(0)
ယောင်းတို့ရေ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍမှာတော့ Collocations (စကားလုံးတွဲများ) အကြောင်းကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Collocation ဆိုတာက စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မကြာခဏတွဲသုံးတဲ့ စကားလုံးတွဲတွေကို ခေါ်တာပါ။ ဥပမာ – အမှားလုပ်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါ တော်တော်များများက “do mistakes” လို့သုံးတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ “make mistakes” လို့ သုံးမှ မှန်တာပါ။
မြန်မာဘာသာစကားမှာဆိုရင် လူတွေ သေဆုံးကြတဲ့အခါ ကွယ်လွန်တယ်၊ အနိစ္စရောက်တယ်၊ သေတယ် စသဖြင့် သုံးပြီး ဘုရင်သေတဲ့အခါကျ နတ်ရွာစံတယ်လို့ သုံးတယ်။ ဘုန်းကြီးအတွက်ကျ ပျံလွန်တော်မူတယ်လို့ သုံးတတ်ကြတာမျိုးပေါ့နော်။
စကားလုံးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် တွဲသုံးတတ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ တစ်ဘက်လူရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ပိုပြီးတိတိကျကျ ပိုနားလည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ယောင်းပြောချင်တာတွေကိုလည်း ပိုပြီး ထိထိမိမိ ပြောနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို အသုံးအများဆုံး (သို့) အမှားအများဆုံး စကားလုံးတွဲတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ လေ့လာရင်း ယောင်းရော ဘယ်လောက်ထိ အမှားတွေမှတ်ထားမိလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်နော်….
==> “Catch” တစ်လုံးတည်းဆို ဖမ်းသည်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို တခြား စကားလုံးတွေနဲ့ တွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါ –
(၁) catchaball – ဘောလုံးဖမ်းသည်
(၂) catchabus – ဘတ်စ်ကားစောင့်စီးသည်
(၃) catchacold – အအေးမိသည် (တချို့တွေကတော့ “getacold” လို့လည်း ပြောကြပေမယ့် “catchacold” က ပိုပြီးအသုံးများပါတယ်)
(၄) catch someone’s attention – စိတ်အာရုံဖမ်းစားသည်
Related article >>> အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အကျင့် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ
==> နောက်တစ်ခုက “Save” ဆိုတဲ့ စကားလုံး။ တစ်လုံးတည်းဆိုရင်တော့ လုံခြုံသည် ဆိုတာပေါ့။
(၁) save money – ပိုက်ဆံစုသည်
(၂) save energy – အားအင် ချွေတာသည်
(၃) save time – အချိန်ချွေတာသည်
(၄) save electricity – လျှပ်စစ်ချွေတာသည်
(၅) save someoneaspace – နေရာဦးထားသည်
==> တတိယတစ်ခုက အသုံးများတဲ့ “go”။ သူ့ကိုကော ဘယ်လိုတွေ တွဲသုံးကြည့်မလဲ?
(၁) go mad – စိတ်ဆိုးသွားသည်
(၂) go abroad – နိုင်ငံခြား ခရီးသွားသည် (တော်တော်များများက “go to abroad”ဆိုပြီးသုံးနေကျတာတွေ့ရလို့။
==> နောက်တစ်ခုက “make” ပြုလုပ်သည်ပေါ့။ သူနဲ့တွဲသုံးတာတွေကျတော့
(၁) make breakfast/ lunch/ dinner – မနက်စာ (နေ့လည်စာ၊ညစာ) စားသည်
(၂) make tea/ coffee – လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီဖျော်သည်
(၃) make time – အချိန်ရအောင် လုပ်သည်
(၄) makealoss/ profit – အရှုံးပေါ်သည်၊ အမြတ်ထွက်သည်
==> “take” မြန်မာလို ဆိုရင်တော့ ယူသည်ပေါ့နော်။ သူ့ကိုတော့ အခုလိုပဲ တွဲသုံးပါတယ်။
(၁) takeabreak – ခဏအနားယူသည်
(၂) takealook – ခဏကြည့်သည်
(၃) takeaseat – ထိုင်သည်
(၄) takeachance – အခွင့်အရေးယူသည်
(၅) take exams – စာမေးပွဲဖြေသည်
(၆) Take notes – မှတ်စုမှတ်သည်
Related article >>> Look တစ်လုံးကို အစုံသုံးကြည့်ရအောင်..
တော်တော်များများ မှားနေကြတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဝေါဟာရ လေ့လာပါဟေ့ဆိုရင် စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီပဲ ကျက်တတ်မှတ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒါရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာလဲဆိုတော့ အဲဒီစကားလုံးတွေကို ဝါကျထဲ ထည့်သုံးပါဟေ့ဆိုရင် ကြောင်သွားကြရော၊ ထည့်သုံးတတ်ပြန်တော့လည်း သူ့ဘေးမှာ ကပ်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ထင်ရာ မြန်မာလိုတွေးပြီး ကပ်ကြပြန်ရော။ အဲဒီအခါမှာ စကားလုံး အသုံးမမှန်တော့ဘဲ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ တစ်ဘက်လူက နားလည်တယ်ဆိုသော်ငြား မသုံးတတ်တော့ လူရယ်စရာ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောချင်တာက ယောင်းက တကယ့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်လို ပြောတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စကားလုံးတွဲတွေကို လေ့လာထားမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ယောငျးတို့ရေ ဒီတဈပတျမှာတော့ အင်ျဂလိပျစာကဏ်ဍမှာတော့ Collocations (စကားလုံးတှဲမြား) အကွောငျးကို တဈစိတျတဈဒသေ ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
Collocation ဆိုတာက စကားပွောတာပဲဖွဈဖွဈ၊ စာရေးတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ မကွာခဏတှဲသုံးတဲ့ စကားလုံးတှဲတှကေို ချေါတာပါ။ ဥပမာ – အမှားလုပျတယျလို့ပွောခငျြတဲ့အခါ တျောတျောမြားမြားက “do mistakes” လို့သုံးတတျကွတယျ။ တကယျတော့ “make mistakes” လို့ သုံးမှ မှနျတာပါ။
မွနျမာဘာသာစကားမှာဆိုရငျ လူတှေ သဆေုံးကွတဲ့အခါ ကှယျလှနျတယျ၊ အနိစ်စရောကျတယျ၊ သတေယျ စသဖွငျ့ သုံးပွီး ဘုရငျသတေဲ့အခါကြ နတျရှာစံတယျလို့ သုံးတယျ။ ဘုနျးကွီးအတှကျကြ ပြံလှနျတျောမူတယျလို့ သုံးတတျကွတာမြိုးပေါ့နျော။
စကားလုံးတှကေို မှနျမှနျကနျကနျ တှဲသုံးတတျမယျဆိုရငျ နိုငျငံခွားသားတှနေဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံတဲ့အခါမှာ တဈဘကျလူရဲ့ ဆိုလိုရငျးကို ပိုပွီးတိတိကကြ ပိုနားလညျလာနိုငျမှာဖွဈပွီး ယောငျးပွောခငျြတာတှကေိုလညျး ပိုပွီး ထိထိမိမိ ပွောနိုငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါဆို အသုံးအမြားဆုံး (သို့) အမှားအမြားဆုံး စကားလုံးတှဲတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။ လလေ့ာရငျး ယောငျးရော ဘယျလောကျထိ အမှားတှမှေတျထားမိလဲဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျနျော….
==> “Catch” တဈလုံးတညျးဆို ဖမျးသညျလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ကို တခွား စကားလုံးတှနေဲ့ တှဲကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ –
(၁) catchaball – ဘောလုံးဖမျးသညျ
(၂) catchabus – ဘတျဈကားစောငျ့စီးသညျ
(၃) catchacold – အအေးမိသညျ (တခြို့တှကေတော့ “getacold” လို့လညျး ပွောကွပမေယျ့ “catchacold” က ပိုပွီးအသုံးမြားပါတယျ)
(၄) catch someone’s attention – စိတျအာရုံဖမျးစားသညျ
Related article >>> အင်ျဂလိပျစာအုပျတှဖေတျတဲ့အကငျြ့ ဘယျလိုတညျဆောကျကွမလဲ
==> နောကျတဈခုက “Save” ဆိုတဲ့ စကားလုံး။ တဈလုံးတညျးဆိုရငျတော့ လုံခွုံသညျ ဆိုတာပေါ့။
(၁) save money – ပိုကျဆံစုသညျ
(၂) save energy – အားအငျ ခြှတောသညျ
(၃) save time – အခြိနျခြှတောသညျ
(၄) save electricity – လြှပျစဈခြှတောသညျ
(၅) save someoneaspace – နရောဦးထားသညျ
==> တတိယတဈခုက အသုံးမြားတဲ့ “go”။ သူ့ကိုကော ဘယျလိုတှေ တှဲသုံးကွညျ့မလဲ?
(၁) go mad – စိတျဆိုးသှားသညျ
(၂) go abroad – နိုငျငံခွား ခရီးသှားသညျ (တျောတျောမြားမြားက “go to abroad”ဆိုပွီးသုံးနကေတြာတှရေ့လို့။
==> နောကျတဈခုက “make” ပွုလုပျသညျပေါ့။ သူနဲ့တှဲသုံးတာတှကေတြော့
(၁) make breakfast/ lunch/ dinner – မနကျစာ (နလေ့ညျစာ၊ညစာ) စားသညျ
(၂) make tea/ coffee – လကျဖကျရညျ၊ ကျောဖီဖြျောသညျ
(၃) make time – အခြိနျရအောငျ လုပျသညျ
(၄) makealoss/ profit – အရှုံးပျေါသညျ၊ အမွတျထှကျသညျ
==> “take” မွနျမာလို ဆိုရငျတော့ ယူသညျပေါ့နျော။ သူ့ကိုတော့ အခုလိုပဲ တှဲသုံးပါတယျ။
(၁) takeabreak – ခဏအနားယူသညျ
(၂) takealook – ခဏကွညျ့သညျ
(၃) takeaseat – ထိုငျသညျ
(၄) takeachance – အခှငျ့အရေးယူသညျ
(၅) take exams – စာမေးပှဲဖွသေညျ
(၆) Take notes – မှတျစုမှတျသညျ
Related article >>> Look တဈလုံးကို အစုံသုံးကွညျ့ရအောငျ..
တျောတျောမြားမြား မှားနကွေတာ တဈခုရှိတယျ။ ဝေါဟာရ လလေ့ာပါဟဆေို့ရငျ စကားလုံးတဈလုံးခငျြးစီပဲ ကကျြတတျမှတျတတျကွတယျ။ အဲဒါရဲ့ အကြိုးဆကျက ဘာလဲဆိုတော့ အဲဒီစကားလုံးတှကေို ဝါကထြဲ ထညျ့သုံးပါဟဆေို့ရငျ ကွောငျသှားကွရော၊ ထညျ့သုံးတတျပွနျတော့လညျး သူ့ဘေးမှာ ကပျတဲ့ စကားလုံးတှကေို ထငျရာ မွနျမာလိုတှေးပွီး ကပျကွပွနျရော။ အဲဒီအခါမှာ စကားလုံး အသုံးမမှနျတော့ဘဲ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။
တဈခါတလေ တဈဘကျလူက နားလညျတယျဆိုသျောငွား မသုံးတတျတော့ လူရယျစရာ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွောခငျြတာက ယောငျးက တကယျ့ နိုငျငံခွားသားတဈယောကျလို ပွောတတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ စကားလုံးတှဲတှကေို လလေ့ာထားမှ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။
Tagged Collocation, Knowledge, Sunday English, Usage
Knowledge Women News
မိန်းကလေးမို့ အမြင့်မတက်ရဘူးဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်ချေဖျက်ပြခဲ့သူ
Posted on July 2, 2018 July 25, 2018 Author Luke Kyaw
လယ်တောမှာ ကြီးပြီး အာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်လာခဲ့သူ ကောင်မလေးတစ်ယောက်
Posted on April 11, 2019 June 25, 2019 Author Stella
မှတ်နိုင်စွမ်းအားက အစားလေးနဲ့ထပ်ဖြည့်လိုက်မှ ပြည့်စုံသွားတာမျိုး
ရာသီခွင်အရ မိန်းမကို အချစ်တတ်ဆုံးယောကျာ်းများ
Posted on June 3, 2017 June 3, 2017 Author
Rin ယောင်းတို့ကို ဒီအပတ်ဗေဒင်ဟောပေးမယ်။ ဥာဏ်ပူဇော်ခပေးစရာမလိုတဲ့ ဗေဒင်ဆရာနော်။
Braces တပ်သူများ ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများ
မုဒိမ်းသမားကို သတ်ဖြတ်မှုအတွက် ကြိုးပေးခံရသူ ရေဟာနီ ဂျေဘာရီ